Steam Game တွေကို Android နဲ့ iOS Device တွေပေါ်မှာဆော့နိုင်တော့မယ်
10 May 2018 . 10:56 AM
Valve ရဲ့လက်အောက်မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ Steam Gaming Platform ကြီးက ပြည်တွင်းမှာပါ နာမည်ကြီးပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေများပြားတာကြောင့် Steam အနေနှဲ့Sony ရဲ့ Remote Play နဲ့ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ Steam Link ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Steam Link App ကို Android နဲ့ iOS အတွက်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ App ကိုထုတ်ပေးမယ့်အချိန်ကိုတော့ မေလ ၂၁ ရက်နေ့လို့ Steam ပြောထားပါတယ်။ Steam Link App ကိုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ Android မှာ Beta Version ထုတ်ပေးထားပြီးပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။
Steam Link ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် Steam သုံးနေတဲ့ သင့်ကွန်ပျူတာကိုတော့ အင်တာနက်ချိတ်ပြီးဖွင့်ထားဖို့လိုဦးမှာပါ။ ကွန်ပျူတာပေါ်က Game တွေကိုဖွင့်ဆော့တဲ့အချိန် ဖုန်းမှာ Streaming လုပ်ပြီးဆော့တဲ့နည်းကို သုံးထာပါ။ ဖုန်းကိုတော့ Steam Controller ဒါမှမဟုတ် အခြား Controller တစ်ခုခုနဲ့တွဲပြီး Game တွေကို ကောင်းကောင်းဆော့လို့ရပါတယ်။ Android ဆိုရင် Phone ၊ Tablet နဲ့ Android TV တွေမှာ ဆော့လို့ရမှာဖြစ်ပြီး Apple ဆိုရင် iPhone ၊ iPad နဲ့ Apple TV တွေမှာ ဆော့လို့ရနိုင်မယ်လို့ တရားဝင်ကြေငြာထားပါတယ်။
Steam ရဲ့နောက်ထပ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Steam Video App ကိုလည်း Android နဲ့ iOS အတွက်ထုတ်ပေးသွားဦးမယ်လို့ ကြေငြာထားပါတယ်။ Steam Video App ကတော့ Steam Library ထဲမှာ သင်ဝယ်ယူထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို ဖုန်းပေါ်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ WiFi ဒါမှမဟုတ် Cellular Data အသုံးပြုပြီး ကြည့်ရှုနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို Download ရယူပြီး Offline ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Valve ရဲ့လကျအောကျမှာ အောငျမွငျနတေဲ့ Steam Gaming Platform ကွီးက ပွညျတှငျးမှာပါ နာမညျကွီးပါတယျ။ အသုံးပွုသူတှမြေားပွားတာကွောငျ့ Steam အနနေှဲ့Sony ရဲ့ Remote Play နဲ့ယှဉျပွိုငျဖို့ Steam Link ဝနျဆောငျမှုကို စတငျတာဖွဈနိုငျပါတယျ။
Steam Link App ကို Android နဲ့ iOS အတှကျထုတျပေးမှာဖွဈပါတယျ။ App ကိုထုတျပေးမယျ့အခြိနျကိုတော့ မလေ ၂၁ ရကျနလေို့ Steam ပွောထားပါတယျ။ Steam Link App ကိုလကျရှိအခြိနျမှာတော့ Android မှာ Beta Version ထုတျပေးထားပွီးပွီလို့လညျး သိရပါတယျ။
Steam Link ကိုအသုံးပွုဖို့အတှကျ Steam သုံးနတေဲ့ သငျ့ကှနျပြူတာကိုတော့ အငျတာနကျခြိတျပွီးဖှငျ့ထားဖို့လိုဦးမှာပါ။ ကှနျပြူတာပျေါက Game တှကေိုဖှငျ့ဆော့တဲ့အခြိနျ ဖုနျးမှာ Streaming လုပျပွီးဆော့တဲ့နညျးကို သုံးထာပါ။ ဖုနျးကိုတော့ Steam Controller ဒါမှမဟုတျ အခွား Controller တဈခုခုနဲ့တှဲပွီး Game တှကေို ကောငျးကောငျးဆော့လို့ရပါတယျ။ Android ဆိုရငျ Phone ၊ Tablet နဲ့ Android TV တှမှော ဆော့လို့ရမှာဖွဈပွီး Apple ဆိုရငျ iPhone ၊ iPad နဲ့ Apple TV တှမှော ဆော့လို့ရနိုငျမယျလို့ တရားဝငျကွငွောထားပါတယျ။
Steam ရဲ့နောကျထပျဝနျဆောငျမှုတဈခုဖွဈတဲ့ Steam Video App ကိုလညျး Android နဲ့ iOS အတှကျထုတျပေးသှားဦးမယျလို့ ကွငွောထားပါတယျ။ Steam Video App ကတော့ Steam Library ထဲမှာ သငျဝယျယူထားတဲ့ ရုပျရှငျတှကေို ဖုနျးပျေါမှာ ကွညျ့ရှုနိုငျစဖေို့ပဲဖွဈပါတယျ။ WiFi ဒါမှမဟုတျ Cellular Data အသုံးပွုပွီး ကွညျ့ရှုနိုငျမယျလို့သိရပါတယျ။ ရုပျရှငျဇာတျကားတှကေို Download ရယူပွီး Offline ကွညျ့နိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
by 2B .9hours ago